DAAWO SAWIRO:- Xarakada Al-shabaab oo gubtay daawooyin ay sheegeen inay dhaceen.
on September 09 2013 Wararka naga soo gaaraya degmada Baraawe ee gobalka Sh/hoose ayaa waxay sheegayaan in Xarakada Al-shabaab ay halkaas ku gubeen dawooyin ay ku sheegeen kuwo wakhtigooda uu dhacay.
Saraakiil ka tirsan Xarakada Al-shabaab ee u qaabilsan dhinaca caafimaadka ayaa ku eedeeyey dowladda Turkiga inay dalka Soomaaliya keeneen daawooyin dhacay, laakiin ay iyagu markii ay baaritaano iyo dabagal ku sameeyeen la ogaaday in daawooyinkaasi ay yihiin kuwa dhacay, sidaasna lagu gubay.
Dowladda Turkiga oo ahaa dowladdii ugu horeeyey ee usoo gurmaday Soomaaliya ka dib markii sanadka 2011-ka ay abaar aad u xoogan ka dilaacday koonfurta dalka Soomaaliya, waxaana xarumo ay ka degan yihiin magaalada Muqdisho dhowr jeer oo hore weeraro kusoo qaaday Xarakada Al-shabaab.
Xarakada Al-shabaab ayaa dowladaha gacan siinaya Soomaaliya inta badan ku eedeeya inay yihiin kuwa dano gaar ah ka leh, islamarkaana weeraro iyo qaraxyo u geeysta xarumaha ay kaga sugan yihiin magaalada Muqdisho.